Wax ka qabashada sababaha tahriibka
Tani waa faallo ka turjumeysa aragtida dawladda Maraykanka.
Maamulka Biden iyo Harris ayaa dejiyey hanaan yididiilo fog leh, si wax looga qabto waxyaabaha sababta u ah hijrada aan waddada saxda ah loo soo marin ama dhaqdhaqaaqyada dadka ee labada dhinac ee xadka, kuwaas oo ka baxsan xeerarka ama heshiisyada caalamiga ah ee maamula xadadka caalamiga ah ee la iskaga gudbo. Hanaankan ayaa ah mid la shaqeyn doona dalalka Bartamaha qaaradda America iyo kuwa kale ee Maraykanka ay wada shaqeynta leeyihiin, ururada bulshada, shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo ururada caalamiga ah si wax looga qabto xaaladaha gobolka ee keenaya in dad sidaas u badani ay guryahoodii ka soo cararaan, Maraykankana yimaaddaan.
Kulan dhinaca muuqaalka ah oo 26ka bishii April ay Kamala Harris la yeelatay Madaxweynaha Guatemala, Alejandro Giammattei, ayey ku sheegtay in dhowr qodob oo muddo soo jiray ay yihiin waxa keenaya hijrada aan waddada saxda ah loo soo marin.
“Waxaan eegaynaa arrimaha saboolnimada iyo jiritaan la’aanta fursadaha dhaqaale; jawiga cimilada ee daran, iyo la qabsi la’aanta cimilada’ iyo waliba musuqmaasuqa iyo maamul xumada; iyo gacan ka hadalka lagala hortago dumarka, dadka dhulka loogu yimid, LGBTQ-ga iyo kuwa Afrika ka soo jeeda.
Kamala Harris ayaa intaas ku dartay in “Maraykanku uu qorsheynayo inuu kordhiyo gargaarka gobolka; uu xoojiyo iskaashiga si socdaalka loogu maareeyo si wanaagsan, ammaan ah, bani’aadanimana ku jirto,”
Madaxweyne Kuxigeen Harris ayaa shaaca ka rogtay, kadib kulankii muuqaalka ahaa, in Maraykanku $310 milyan oo dheeraad ah uu ku bixin doono gargaarka bani’aadaminimo iyo amniga cuntada ee gobolada baahida u qaba kaalmada degdegga ah.
Deeqdan waxaa qeyb ka ah kaalmo bani’aadaminimo oo la siinayo dadka reer El Salvador, Guatemla, Honduras, iyo kuwa gobolka. Kaalmada bani’aadaminimo ayaa lagu bixinayaa raashin degdeg ah, hoy, daryeel caafimaad, baaris dhinaca dhafaqa-darrada ah, gacmo dhaqista, qalabka nadaafadda, ilaalada, barnaamijyada dib-u-soo-celinta dhaqaale iyo tababaro dhinaca adkeysiga ah, kuwaas oo la xiriira musiibooyinka iyo isbedellada cimilada.
“Qeyb ka mid ah niyadda ka dambeysa hawsheena ayaa ah, dabcan, in cirifka galbeed ee dunidu uu dhamaanteen hoy innoo yahay, dadka ku noolina ay yihiin dariskeena, waajib ayaana naga saaran inaan la shaqeyno,” ayey tiri Madaxweyne Kuxigeen Harris.
Waxay intaas ku dartay “Waxaan rumeysanahay in si shaqada loogu guuleysto, ay taasi u baahan tahay in qof walbaa ka qeyb qaato. Waxaanan rumeysanahay, sidoo kale, inay u baahan tahay doonis dhinaca siyaasadda ah iyo hawl adag si yoolasha looga guul keeno, loona abuuro dareen rajo xiliga muqsaqbalka.”